Dhageyso AMISOM Iyo Maleeshiyaatka Dowlada Oo Burburiyay Boqolaal Guri. – Bogga Calamada.com
Dhageyso AMISOM Iyo Maleeshiyaatka Dowlada Oo Burburiyay Boqolaal Guri.
Labadii maalin ee u dambeysay waxey ciidamada Kufaarta AMISOM iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka howlo guryo burburin ah ka wadeen qeybo ka mid ah xaafadaha ay ka koobantahay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Buqolaal guri ayeey shisheeyaha maleeshiyaatka dowlada mariyeen cagaf-cafyo kuwaasi oo qaarkood xilliyadii la burburinayay ay ku jireen dad u badan caruur iyo waayeelo.
Guryaha dadka laga burburiyay ayaa ku yaala xaafadda Zoona Key gaar ahaan agagaarka jaamacadaha’waxeyna warar hoose sheegayaan in dhulka laga burburinayo guryaha uu si qarsoodi ah ku gatay madaxweynaha dowlada Ridada federaalka.
Mid ka mid ah hooyooyinkii laga burburiyay guryaha oo la hadashay Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa sheegtay in iyadoo wax digniino ah lasoo gaarsiin markale ay ka warheleen cagaf-cagafyo guryahooda lagu burburinayo taasi oo qeyb ka ah dhibaatada Kufaarta iyo Murtadiinta ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Halkan Ka Dhageyso Boqlaalka Guri Ee La Burburiyay.